Parlamaan hawshiisi gabay iyo aqoonsi raadiska xukuumadaheenu laba kala fog.
Sunday July 26, 2020 - 09:22:19 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Parlamaan hawshiisi gabay iyo aqoonsi raadiska xukuumadaheenu laba kala fog. Waxaa cadaatay horena loo wada arkayey in dhibta ugu weyn ee Somaliland la soo kacaa kufaysey uu noqday golihii sharci dejinta oo waajibaadka dalkan ka saarna gabay. Hadaynu din u milcsano golahan fadhiidka noqday iyo waxyaalihi sababta u ahaa inuu sidan uu maanta yahay ku danbeeyey waxaynu u kala saarayna laba qodob. Qodoka kowaad. Waa qodob ku saabsan siday ku yimaadeen .
Qodoka labaad wuxuu ku saabsan sidii ay u dhaqmeen iyaga iyo shir gudoonkoodi. Qodobka hore ku dheeraan mayo oo waa ka wada dheregsanahay habkay ku yimaadeen oo aad moodayso mid reeraysan iyo hebel ha shaqo tago ana iga gee ee aan ahayn mid danta qaranka iyo ta gobolka midna aan ku salaysnayn, qodbkaas halkaas u dhaafi maayo. Qodabka labaad hadaan u guda galo isaga qudhiisa wuxuu sii kabaya kii hore oo waxaa markiiba inoo muuqatay in xildhibaanadi la soo doortay ay xooga saareen kana door bideen waajibki Sharma, inay sugaan oo keliya maalinta xukuumada iyo xisbiyada mucaaradku ku hirdamayaan talada dalka iyadoo qolo waliba doonayso inay marsato golaha waxay ajendeiyaga u gaar ah, waxaa caado noqotay in lacag lagu baayaco xildhibaanada wakhtiyada xiisadu kacsan tahay oo lacag loo qaybiyo. Waxay arimahaas ina dhaxal siiyeen in xildhibaanadi ku soo baxay magaca xisbi ay tuuraan xisbinimadi oo ay noqdaan niman iskood u shaqaysta iyagoo noqday xildhibaano su bedelay in mid walba oo ka mid ahi maalinba isha ku haya halka ay ka bisishahay.
Ma wada eedayn karo xildhibaanada runtii, way ku jiraan qaar sharaftooda iyo shaadhkooda ilaashada laakin ma badna. Waxaa fiican waliba in la qeexo oo farta lagu fiiqo in eeda inta badan ay lahaayeen shir gudoonki inta badan maamulayey golahan oo ahaa mid isagu laba aflayn ku waday golaha gaar ahaan gudoomiyihi isagoo dhinacna ah gudoomiyihii golaha dalka ugu sareeya dhinaca kalena hunguraynayey kursiga dalka ugu sareeya Isla markaana ahaa gudoomiye xisbi mucaarad ah ,
waxaa soo baxday halayska caan noqotay oo la odhan jirey ' Ahna Anna's taas oo looga jeeday labadi shaqo ee aan islahayn ee uu isku waday gudoomiyuhu, waxaan sidaa u leeyahay waa meelaha ay sartu ka qudhuntay waana mid aan aduunka ku dhaqma dimuqraadiyada ka suurta gelin. Waxaa socotey oo shacabka intiisa badan ay aad ula yaabanaayeen xaaladaas iyada ah oo ay liqi kari waayeen, waxaa ka dhaadhacsanayd gudoomiyaha fikrad ah waa gudoomiye Ciro inuu kursiga dalka salaan uga dhigan karo xilka uu u hayey shacabka inta uu xilkan hayo , halka ay dadka badankiisu aaminsanaayeen inay arintaasi at khalad tahay weliba ay isaga dib ugu soo noqon doonto madaama aanu u gacan banaanayn inuu mucaaradadiisa si fiican uu u muujiyo, madaama uu yahay gudoomiyihi golaha shacabka ee ay shacabku soo doorteen. Waxaa la arki jirey gudoomiyaha isagoo la shiraya Isla markaana xukuumada la qaadanaya qaraaro, isla markaana mudo gaaban gudaheed hadana ka hor imanaya qaraaradi laftigoodi, waa taariikh qoran . Waxaynu ogayn xeerki xukuumadu qaadatay ee ku saabsanaa heshiiski DP world iyo wixii ka dhacay. Maxaa dhacay?
Waxaa aakhirki ay noqotey sidii la filayey ka dib marki uu gudoomiyihi xilki ka degay iyado mudo gaaban oo aan ku filayn ay doorashadi ka hadhay. Waxaa la wada arkayey madaama la waayey mucaarad dhab oo hawshooda u madax banaan in xisbiga kulmiye oo ahaa xisbigi talada hayey uu si fudud ugu guulaysanayo doorashada waanay dhacday. Markay sidaasi dhacday iyo talo xumadi haysatey shir gudoonkaas aan iskuba qaade, golihi sharci dejinto wuxuu isu bedelay gole doorasho oo dhexdiisa laga ololeeyo oo weerar iyo weerar celin isu bedelo waana ta keentay inuu gabo hawlihi ay shacabka iyo dalkana ka sugayeen. Xukuumadaha qudhoodu iyo eeda waxbay ku yeealanayaan madaama ay iyagu u arkayeen inay sidan ugu badinayso, waana wadada ay xukuumada kulmiye ee talada dalka haysa maanta ee bedeshey xukuumadi hore ee kulmiye ay weli ku dhaqmayso, umadana ku daawanayso. Golahaas wuxuu ku danbeeyey mid faraha ka baxay oo maanta Rogan ah,
lana odhan karo inuu burburay awoodna aanu u lahayn inuu dalka ka samata bixiyo carqaladaha hor yaala gaar ahaan ansixinta xeerki doorashada golayaasha oo hor yaalay mudo 10 sano ku dhaw. Hadaan taas ka imaado dhaawac kale ee Somaliland ka soo gaadhay golahaas fadhiidka noqday ayaa ahaa in xukuumadaheeni ku mushquulaan arimahaas iyo olole joogta ah wakhti walba iyo hebel ku xumee, waxaanay taasi ina dhaxal siisay in meesha uu ka baxo hadafki weyna we umadani inta badan ku naaloonaysay oo ah in dalkan loo raadiyo aqoonsi iyadoo golayaal iyo xukuumadba gacmaha lays haysto, xaalkuna uu dhaafi waayo laab la kac iyo dawlad hebla ayaanu casuumad rasmiya ka helnay.
Hadii ay maalmahan danbe ay dhacday oo la arkay dhaqdhaqaaqa xukuumada ee ku saabsan aqoonsi raadiska waxaa la odhan karaa maaha kuwa ku yimi dadaal ee waxay ahaayeen kuwa ka dhashay duruufaha iyo dawladaha inagu xeeran sida kulanki ugu danbeeyey ee ka dhacay jabuuti oo aynu ka mid ahayn ka dib markii laynugu soo casumay.
Hadaba maxaa halka inooga soo baxaya, waxaa inooga soo baxaya ama inala gudboon shacab iyo xukuumadba :
1- inaanay soo noqon taariikhdi golahaas oo kale mar danbe .
2-In la helo gole ku fadhiya siyaasad cad oo danta qaranka wax walba ka hor marinaya lana jaan qaadi kara xukuumad dalka ka talinaysa iyagoo gudanaya waajibkooda kuna ilaalinaya iyada laftigeedu shaqadi loo soo doortay.
3-In xukuumadu aanay ku mashquulin golayaasha qaranka.
4- In la helo mar uun oo la arko gole si dhab ah oo ka fog dano shakhsiya ula xisaabtamaya madaxweynaha iyo wasiiradiisa, shacbkana hor keenaya wixii khalad ee ay gasho xukuumado iyagoon u hamranayn.
5- In la helo gole u xaqsooraya gobolada dalka oo ilaalinaya xuquuqda uu gobol walba leeyahay.
6- In la helo gole ka daba taga shuruuc badan oo la saluugsan yahay oo soo baxay xilli uu dalkani yagleel iyo isu soo jiid ku jiray oo ay tahay maanta in la Saxo. Waan badiyey hadalka , waxaan ku soo gabagabaynaya in la helo Somaliland meel u wada jeeda xilligan isbedelka iyo geeska Afrika waxa ka socda ee saamaynta inagu leh, haday tahay midnimadeena iyo haday tahay xaqa aynu u leenahay inaynu helno ictiraaf buuxa sidii aynu uga mid noqon bulshada caalamka. Waa mahadsan tihiin Suldaan Kabadhe